AbakwaBrits Babuyile! Izindiza Eziyi-16 Iviki Manje Phakathi kwe-UK ne-Jamaica
Ikhaya » Izindaba Zamuva » zezindiza » AbakwaBrits Babuyile! Izindiza Eziyi-16 Iviki Manje Phakathi kwe-UK ne-Jamaica
zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • I-Caribbean • Izindaba zikaHulumeni • Industry Hospitality Industry • Izindaba zaseJamaica • Izindaba • Ukwakha kabusha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba ze-UK Breaking
UNgqongqoshe Wezokuvakasha wase-Jamaica, u-Edmund Bartlett (r) ubamba iqhaza engxoxweni no-anchor wabo we-CNN International, u-Richard Quest, phansi e-World Travel Market e-London, e-United Kingdom, ngoMsombuluko, Novemba 1. U-Bartlett kanye Nezikhulu Eziphezulu Zezokuvakasha base-UK. idayisa ngodlame indawo okuyiwa kuyo i-Jamaica nokuhlangana Nabaphathi Abaphezulu bezindiza ezinkulu zase-UK, abaqhubi bezokuvakasha, izinhlangano zezokuvakasha zamazwe ngamazwe kanye nabezindaba.
UNgqongqoshe wezokuVakasha eJamaica u-Edmund Bartlett izolo (Novemba 1) uthe iJamaica ngokuhamba kwesikhathi kule nyanga izoqala ukuthola okungenani izindiza eziyi-16 ngesonto ezivela e-United Kingdom, okuzobuyisela lesi siqhingi endaweni ecishe ibe yi-100% yezihlalo zezindiza njengoba izinombolo zezokuvakasha zezwe zikhuphuka.
I-Jamaica njengamanje inezinga elingaphansi kwephesenti elilodwa lokutheleleka kwe-Covid ku-Resilient Corridor.
Izwe lisendleleni eqinile yokukhula, futhi uNgqongqoshe wezokuVakasha ujabulile ngempumelelo aseyizuzile kuze kube manje.
Isizwe sikulungele futhi siphephile ukwamukela i-Brits ngamaholide ngezinketho zendiza ezengeziwe.
Njengamanje u-Bartlett use-United Kingdom (e-UK) nethimba lezinga eliphezulu loMnyango Wezokuvakasha kanye ne-Jamaica Tourist Board (i-JTB) elibambe iqhaza kwi-World Travel Market, okungomunye wemibukiso emikhulu yokuhweba ngezokuvakasha yamazwe ngamazwe emhlabeni jikelele. U-Bartlett ujoyinwa nguSihlalo we-JTB, uJohn Lynch; Umqondisi Wezokuvakasha, u-Donovan White; Umeluleki Omkhulu & I-Strategist, Umnyango Wezokuvakasha, u-Delano Seiveright; kanye noMqondisi Wesifunda we-JTB wase-UK naseNyakatho Yurophu, u-Elizabeth Fox.
“Sibe nokusebenzelana okuhle kakhulu nabalingani bethu ababalulekile e-UK futhi sibaqinisekise ngokulungela kweJamaica ngabo nokuphepha kwethu njengendawo esiya kuyo, ngezinga lokutheleleka nge-Covid elingaphansi kwephesenti elilodwa ku-Resilient Corridor. Ukwengeza, ngiyajabula ukubona umthamo wezihlalo zendiza phakathi kwe-UK ne Jamaica cishe amaphesenti ayi-100 alokho okwakuyikho ngaphambi kwe-Covid ngenkathi sisendleleni yokukhula eqinile. Sizimisele kakhulu ngokwenza kanye nemiphumela eqinile, futhi kuyangijabulisa esikuzuzayo kuze kube manje,” kuphawula uBartlett.
Khonamanjalo, uDelano Seiveright waphawula ukuthi “iTUI, iBritish Airways kanye neVirgin Atlantic yizindiza ezintathu ezithwala abagibeli phakathi kwe-UK neJamaica kanti iTUI isebenza izindiza eziyisithupha ngesonto, iVirgin Atlantic izokwenyuka ifinyelele ezinhlanu ngesonto kanye neBritish Airways ezosebenza ezinhlanu ngesonto. . Izindiza ziphela eLondon Heathrow, eLondon Gatwick, eManchester naseBirmingham. Ngaphandle kwalokho, kungenzeka sibone ezinye izinguquko zesheduli njengoba amathimba ethu eqhubeka nezingxoxo nababambiqhaza bethu.”
Ukuxoxisana e-UK kuqede umkhankaso wezimakethe zomhlaba wonke oholwa ngu-Bartlett kanye nezikhulu zakhe eziphezulu ezihlanganisa izimakethe ezimbili ezinkulu zase-Jamaica, i-United States ne-Canada, okuzuze impumelelo enkulu ekukhuphuleni ngendlela emangalisayo ukuhamba ngezindiza esiqhingini kanye nokuqinisekisa ababambiqhaza ku Ukuphepha okuhlobene ne-Covid kwendawo oya kuyo. UNgqongqoshe uphinde wahola izingxoxo e-Dubai, e-United Arab Emirates, nase-Riyadh, e-Saudi Arabia, okuzoholela ekuvulweni kwezokuvakasha kanye amathuba okutshala imali eJamaica.